(44 okushiwo abanye)
I-Thor's Garden Homestead ihlezi endaweni engamahektha amane endaweni ethule emakhilomitha ayisithupha ukusuka edolobheni lasendulo laseLincoln. Indawo yokuhlala enakho konke, enhle isanda kuguqulwa. Igumbi lokuphumula linesitofu sokhuni futhi izivakashi zingakhetha phakathi kwekamelo lokulala elikabili elibheke echibini kanye nama-single amabili abekwe eceleni ophahleni. Indawo ibuyela e-SSSI woodland futhi iyindawo yezilwane zasendle. Le ndawo inoxhaxha lwezindlela zezinyawo futhi imigwaqo ethulile ilungele ukuhamba ngamabhayisikili.
Izivakashi zingasebenzisa yonke indawo yokuhlala, ziphumule ifenisha engadini ngasechibini noma zizule kumahektha amane ezizathu. Indlu yethu iseduze neholide ngakho siyatholakala uma kudingeka usizo kodwa ukungena kuhluke ngokuphelele futhi ubumfihlo bakho buqinisekisiwe. Sinamagumbi amabili okulala anikeza ukukhetha kwemibhede yabashadile noma abangashadile abahamba ndawonye. Sithanda ukunikela ngokunethezeka okuncane okunendawo eningi ngakho khawula inani lezivakashi kwababili.
5.0(44 okushiwo abanye)
5.0 · 44 okushiwo abanye
Idolobha elingokomlando laseLincoln elinesonto lalo elihle, eliphethe elinye lamakhophi ambalwa eMagna Carta, liqhele ngamamayela ayisikhombisa kuphela. Kunesikhungo esisha se-International Bomber Command Centre esiqhele ngamamayela ayisithupha kuphela kanti iWoodhall Spa "The home of golf in England" nayo ingaphakathi kwebanga elifushane. ILincolnshire Wolds eseduze iyindawo engakatholakali enamagquma amahle anezinyawo eziningi ezinhle nangale kwalokho. lolo wugu nezindawo zalo zokungcebeleka ezisogwini lolwandle. Kuningi okumelwe kwenziwe esifundeni sethu noma ngabe ukuhlola indawo yakithi noma ukujwayelana nomlando wethu.
Kokubili indlu yethu neholide kusendaweni eyodwa yamahektha amane kodwa kunengadi enkulu phakathi kwakho ukuze ubumfihlo bakho buqinisekisiwe kodwa sikhona ukuze sikusize uma kudingeka.